Mareykanka: Meydka Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo Webi dhexdiisa laga helay | dayniiile.com
Home WARKII Mareykanka: Meydka Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo Webi dhexdiisa laga helay
Mareykanka: Meydka Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo Webi dhexdiisa laga helay
Muddo 5 Cisho ah ayaa la la’aa Alle u Naxariistee Cabdiraxmaan Cabdifitaax Cali oo ahaa Wiil Dhalinyaro Soomaali ah oo kunoolaa Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota ee dalka Mareyanka, hayeeshee ugu dambeyn meydkiisa la helay.
Wiilka oo dhiganayay Jaamacadda Minnisota ayaa baaritaano ay sameeyeen Ciidamada Amniga waxaa ay ku guuleysteen inay meydkiisa kasoo saaraan webiga Mississippi ee Magaalada Minneapolis.
Qaar kamid ah Ardaydii uu Jaamacadda la dhiganayay ayaa goor hore u gudbiyay Ciifamada Booloska iyo Waalidiintiisa in uu ku sugnaa Cabdiraxmaan Agagaarka webiga Mississippi, taas oo ugu dambeyn la ogaaday in uu ku dhacay kuna dhex dhintay.
Dhowr jeer ayaa sidaan oo kale waxaa webiga Mississippi ee Magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ku dhacay Dhalinyaro Soomaali ah, waxaana Waalidiinta kunool Magaaladaas ay cabasho la xiriirta wabiga u gudbiyeen laamaha Amniga balse aysan waxba ka qaban.
Previous articleMuwaadin Soomaaliyeed oo Xalay lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Next articleAbaarta Soomaaliya: QM oo musiibo ku tilmaamtay 213,000 qof oo halis ugu jira inay macluul u geeriyoodaan
Raysal wasaaraha Itoobiya oo Jabhadda Xureynta Oromada ee OLF ku eedeeyey iney markale xasuuq ka geysteen galbeedka dalkaasi.
Dufaan boor wadata oo Iiraan ku kallifay iney goobaha waxbarashada albaabbda isugu dhufato
Japan oo cabasho rasmi ah u gudbisay Beijing, ka dib markii markab ay leeyihiin ciidamada badda Shiinaha uu ka shiraacday
Guddoomiyaha Golaha Shacabka iyo Wafdi uu hogaaminayo oo u ambabaxay Boqortooyada Sacuudiga gudashada acmaasha Xajka.
35,000 oo arday oo u fadhiistay Imtixaanka dugsiga Sare ee dalka
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo 72 saac kadib u buuxsimi doonto...
Qaar kamid ah Wasiiradii uu xilalka ka qaaday Axmed Karaash oo...
Mohamed Abdullahi Mohamed - May 10, 2022 0